Fahalasan'i Henri Rahaingoson: mpanoratra, mpikabary, poety malagasy ary koa Filoha Lefitry ny Akademy Malagasy
Sary RNS Lyon
"Andrianiko ny teniko, ny an' ny hafa koa feheziko"
, lahatsoratra malaza mitoetra ao amin' ny fanahy sy ny fon ´ ny Malagasy maro. Misaono tokoa ny tontolo ny literatiora. Henri Rahaingoson alias DI dia maty tamin'ny Alarobia 13 Aprily teo tamin' ny faha 78 ny taonany noho ny aretim-po. Akademisiana, mpanoratra, mpampianatra, Henri Rahaingoson dia tsy mitsahatra mamindra ny soatoavina eo amin' ny fiaraha-monina sy ny teny Malagasy. Mpikambana ao amin' ny fikambanan' ny poety sy mpanoratra ao Madagascar (UPEM), Filoha Lefitry ny Akademy Malagasy ihany koa Henri Rahaingoson.
>> Misaotra an'i Menakely Menabe
1.Posté par Andriamanakaja le 15/04/2016 06:16
Misaotra anao niady ho an'ny tenindrazan-tsika,